चयन वस्तुको नाम निश्चित गर्नुहोस्, र सम्बन्धित लिङ्कहरू.
चयन वस्तुका लागि नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्.
वस्तु, ग्राफिक वा फ्रेमको अर्थ दिने नाम निश्चित गर्नुहोस्, त्यसैले तपाईँंले लामो कागजातमा छिट्टै पछि अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ.
वैकल्पिक पाठ (फ्रेमहरू, ग्राफिक्स, र वस्तुहरू मात्र फ्लोट गर्दा)
वेब ब्राउजरमा प्रदर्शन गर्न पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् जब चयन वस्तु उपलब्ध हुँदैन. अक्ष्यमता सँग मानिसहरूलाई सहोग गर्न वैकल्पिक पाठ पनि प्रयोग हुन्छ.
चयन वस्तुका लागि सुरक्षा विकल्प निश्चित गर्नुहोस्.
चयन वस्तुको परिवर्तनहरू सामाग्रीहरूमा बचाउनुहोस्.
तपाईँं अझै पनि चयन वस्तुको सामाग्रीहरू प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ.
अवस्था सुरक्षा गर्नुहोस्
हालको कागजातमा चयन वस्तुको अवस्थालाई ताल्चा लगाउनुहोस्.
साइज सुरक्षित गर्नुहोस्
चयन वस्तुको साइज ताल्चा लगाउनुहोस्.
चयन वस्तुका लागि टङ्कण र पाठ विकल्प निश्चित गर्नुहोस्.
पढ्ने-मात्र कागजातमा सम्पादनिय (फ्रेमहरू मात्र)
कागजातमा फ्रेमको सामाग्रीहरू सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ जुन पढ्ने-मात्र हो (लेखन-सुरक्षित).
तपाईँंले कागजातमा टङ्कण गरेको बेला चयन वस्तु घुसाउनुहोस्.
फ्रेममा उपयुक्त्त पाठ फ्लो दिशा निश्चित गर्नुहोस्. पृष्ठका लागि पूर्वनिर्धारित पाठ फ्लो सेटिङस प्रयोग गर्नका लागि,चयन गर्नुहोस् सुपरअर्डिनेट वस्तु सेटिङस प्रयोग गर्नुहोस् सूचीबाट.